Yemen oo Soomaaliya la taageero ku baaqday. Ruunkinet 28/10/2009
Dowlada Wadanka Yemen ayaa ku baaqday Beesha Caalamka iyo Wadamada Carbeed in ay laba jibaaraan ka shaqaynta nabada iyo degnaanshaha dalka Soomaaliya oo ay la degeen dagaalo iyo rabshado.
Madaxweynaha Dalka Yemen Cali Cabdalle Saalax oo maanta kulan la qaatay Madaxweynaha DFKM ah ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed oo booqasho ku jooga dalkaas ayaa Wadamada Carbeed ee deriska la ah Soomaaliya looga bahanyahay in ay sii xoojiyaan ka shaqaynta nabada iyo deganaanshaha Soomaaliya.
Wuxuuna balanqaaday in Dowladiisa ay diyaar u tahay in ay wax ka qabato xaalada iminka ka taagan gudaha dalka Soomaaliya,iyadoo u tibaaxay in u taageero dheeraad ay siin doonto DFKM ah oo u hogaamiyo Shariif Sheikh Axmed.
Wuxuuna ka dhawaajiyey in amaan darida ka jirta Soomaaliya ay saamayn ku yeelanayso qaar ka mid ah gobolada Wadanka Yemen isla mar ahaanta Dowlada Yemen looga baahanyahay in ay ka shaqayso nabada iyo deganaanshaha Soomaaliya.
Kulanka inta u socday Madaxweyne Shariif ayaa waxaa u Madaxweynaha Dalkaas Yemen uga warbixiyey xaalada ay iminka ku sugantahay dalka Soomaaliya,iyadoo u sidoo kale uga waramay horumaradi ay gaartay DFKM ah ee Soomaaliya mudooyinki la soo dhaafay.
Ruunkiet Abdirashiid Rashka